OkMap, eyona nto ingcono ukudala nokuhlela imephu yeGPS. MAHHALA - Geofumed
I-OkMap, eyona nto ibhetele yokwenza kunye nokuhlela iimephu zeGPS. MAHHALA
NgoSeptemba, 2013 Google umhlaba / imephu, GPS / Izixhobo, Ukuprinta kokuqala
I-OkMap mhlawumbi enye yeenkqubo ezinamandla kakhulu zokwakhiwa, ukushicilelwa nokulawulwa kweemephu zeGPS. Kwaye kunye nesimo sayo esibalulekileyo: Kumahhala.
Yonke imihla siye sabona isidingo sokumisa imephu, ukulungiswa komfanekiso, ukulayisha ifayile yefom okanye i-kml ukuya kwi-GPS ye-Garmin. Imisebenzi enjengaleyo ilula kakhulu isebenzisa i-OkMaps. Masibone ezinye zeemfanelo zawo:
Ixhasa idatha ye-vectorial yeefomati ezisetyenziswa kakhulu, kubandakanywa imodeli yendawo ye-digital (DEM) nedatha ehambelana nokuphakama.
Unokwenza iziqendu zendlela zohlobo lweendlela, iindlela kunye neengoma ukusuka kwideskithophu uze uyilayishe kwi-GPS.
Idatha efunyenwe yi-GPS inokulayishwa kwikhompyutheni ukuba ibonise kwaye ihlalutye ngeendlela ezahlukeneyo zeengxelo kunye neenkcukacha.
Odibanisa laptop ku GPS sazi indawo ezimephini ngesikhephe ukusuka kwikhusi kwaye ukuba unodibaniso ukuthumela data kude ngexesha lenene.
Idibanisa kwiGoogle Earth kunye neeGoogle amamephu, kuquka nedatha yendlela kwi-3D.
Ukongeza kwifomati ye-kml ngokucacileyo kwi-jpg imifanekiso kwifom ye-hybrid, inakho ukuvelisa ngokuzenzekelayo ifom ye-kmz ehambelana neemephu ze-Garmin yangemuva kunye nefomati ye-OruxMaps. Oku kubandakanya imifanekiso yeemifanekiso eziphathekayo kunye nefomathi ye-ECW, ezo zihamba njengeefayile zeefayile kunye neefowuni ezisetyenzisiweyo kwithebhulethi ye-kmz.
Iifomati ezixhaswe yi-OkMap
Ifomathi esheshayo: tif, jpg, png, gif, bmp, wmf, emf.
Kwimodeli yomhlaba wedijithali isekela isongezelelo se-.hgt, esiyi-DEM ephuhliswe yiNASA kunye ne-NGA. Iifomati usebenzisa OkMap na SRTM-3 ukuba pixel imizuzwana 3, malunga neemitha 90 kunye SRTM-1 1 yesibini apho malunga neemitha 30.
Nge-DEM, i-OkMap ifumana ukuphakama kwinqanaba elwandle malunga neengongoma ezifunyenweyo, ukunikezela ngephi nganye yefayile yeGPX isilinganiselo esiphezulu; kunye nento ongayenza ngayo ngoko ukwakha igrafu yokuphakama kwindlela ehamba ngayo.
Idatha yeDEM ingalandwa kwi-http: //dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1
Ngokuphathelele idatha ye-vector, i-OkMap inokulayisha iifayile ze-GPX, ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo kuba ngumgangatho wokutshintshiselana. Ukuxhasa, kokubili ukuvula nokugcina:
Idatha ye-Garmin POI
Izixhobo ezixhasiweyo, zonke eziquka ukuguqulwa kweefayile usebenzisa GPS Babel.
Iinkcukacha ezongezelelweyo ukusetyenziswa kweemephu zeGPS
Inkqubo ibonakala isisiseko, kodwa ngokwenene yinto ehamba nayo yonke into eyenzayo; Nazi ezinye iimpawu ukuba uzame:
Vector kunye nokuthunyelwa kwe-raster kwiGoogle Earth
Vula indawo yangoku kwiGoogle Maps
Yenza inkonzo yemephu, ngefomathi yeok
UMoses wezithombe kunye nesizukulwana sesithandabuzo
EMpuma imephu eya ngasentla
I-raster yemephu ye-raster
Sebenzisa ukuguqulwa GPS Babel
Yakha i-Toponymy layers, kwi-GPX, ifayile yefomathi, i-POI csv (Garmin) kunye ne-OzyExplorer
Ukuguqulwa okukhulu kwezilungelelaniso
Ukubalwa kwemida kunye ne-azimuth
Ukuguquka phakathi kweefomathi ezahlukeneyo zevot
Thumela idatha kwi-GPS
Ukuhamba ngokuhamba kwendlela, ngokudibanisa izaziso zomsindo
Ukumemela kokuhamba kwe-NMEA
Iquka iilwimi eziliqela, kuquka iSpanish.
Ngokuqhelekileyo, isisombululo esithakazelisayo sokulawula imephu ye-GPS. Nangona ubuncedo balo kuselezinjongo zokuhamba, kwiinkalo ezifana nolwandle, ukuloba, iinkonzo zokuhlangula, i-geocoding kunye nabanye abagxininisekile ekuchanikweni akuyona into ebalulekileyo kodwa ukusebenza kwendawo ye-geolocation.
Akukho software ekhululekile, inelungelo lobunikazi, kodwa likhululekile. Isebenza kuphela kwi-Windows, kwaye idinga i3.5 SP1 Framework
Ividiyo elandelayo ibonisa indlela yokwenza i-Garmin Custom Map usebenzisa le software.
Post edlulileyo«Edlulileyo Gcina ithempulethi ye-UTM kwi Geographies ekukhuthazeni iiGofumadas
Post Next ... ngoku ngoku ...Okulandelayo "
Impendulo ibenye ku "OkMap, eyona nto ibhetele yokwenza kunye nokuhlela iimephu zeGPS. MAHHALA ”
Mahala? Ingqungquthela yamahhala ayikuvumeli ukuba uyenze nantoni na, ngoko-ke ukhululekile unayo iikhredithi ...